musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Gore rine chepfu pamusoro peGerman mushure mekuputika kweMakemikari
Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Rakanga riri zuva rakanaka nematenga ebhuruu muDuesseldorf neCologne, Germany kudzamara kuputika kwakazunza Chemical park muLeverkusen zvichikonzera gore rehupfu kutiza.
Vhiki rapfuura mafashama mudunhu rimwe chetero akakonzera njodzi nerufu. Nhasi kuputika muChempark Leverkusen, iri pakati peDuesseldorf neCologne muGerman State yeNorthrhine Westphalia.
Nhasi kuputika kukuru kuri kumanikidza vanhu mudunhu rimwe chete kupinda mune imwe njodzi, zvichikonzera mwero wepamusoro wekusvinura mushure megore rinotyisa.
Iyo Chempark Iri kupararira mumadhorobha matatu muLeverkusen, Dormagen neKrefeld-Uerdingen inokwana 13.3 mativi emakiromita, inotorwa nemakambani anopfuura makumi matanhatu uye ichishandisa vanhu zviuru makumi mashanu.
Bayer fekitori yezvokurapa chikamu cheichi chinetso. Akawanda mafreeway uye makuru njanji njanji dzekupindirana uye zvemuno zvitima zvinobatanidza makuru metropolitan nzvimbo mumeso kuona kufekitori.
Mangwanani ano kuputika kukuru kwakakonzera gore rine chepfu kutiza uye parizvino riri kufamba rakananga kumaguta eLeichlingen neBurscheid mudunhu rerudo reBergischer. Iwo madhorobha anozivikanwa nemaseru-avo enharaunda uye nzvimbo yeguta nemusika wayo nemachechi.
Vashandisi ve Chempark saiti mu Leverkusen akati chakakonzera kuputika uku hachina kujeka.
Sangano reFederal rekuchengetedza vagari, uye masangano enjodzi vari kuisa chikamu pakuputika semamiriro ezvinhu ane njodzi kune vagari vemo, kuraira vanhu kuti vagare mukati nekuvhara magonhi nemahwindo.